Dhageyso-Barlamaanka Soomaaliya oo looga digey inay maqnaadaan inta uu socdo kalfadhiga 7aad. – Radio Daljir
Dhageyso-Barlamaanka Soomaaliya oo looga digey inay maqnaadaan inta uu socdo kalfadhiga 7aad.
Janaayo 25, 2016 11:38 g 0
Muqdisho, 26, Jan, 2016-Mudnaayaasha barlamaanka dowladda Federalka ah ee Soomaaliya ayaa looga digey inay ka maqnaadaan kulamada barlamaanka xilli dalku xaalad adag kujiro.
Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee barlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalle Cawad oo kahadlayey kulanka barlamaanka ayaa sheegay in kalfadhiga 7aad ee barlamaanka ay horyaalaan shaqooyin culus oo aan loo kala maqnaan karin.
“Baarlamaanka ka maqan kulamada Golaha Shacabka waxaan ku wargalineynaa in ay soo xaadiraan, maadaama ay barlamaanka horyaalaan shaqooyin culus oo wadajir u baahan”, Ayuu yiri Cawad.
Barlamaanka Soomaaliya ee xilligaani jira ayaa kalfadhiga 7aad wuxuu noqon doonaa kii ugu dambeeyey maadaama sanadkaani lafilayo in dalku uu yeesho barlamaan cusub, walow laysku hayo xulitaankiisa.
Halkaan Ka Dhageyso
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka tacsiyeeyey geerida marxuum Cabdi Xaaji Goob-doon.
Alshabaab oo dib uqabsatay Ceel-cadde kadib markii ciidamada Kenya xalay ka bexeen.